टमाटर दाग कसरी हटाउने बेजिया
टोनी टोरेस | 10/06/2021 10:00 | अद्यावधिक गरियो 10/06/2021 11:01 | घर
टमाटर दाग हटाउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि दाग नाजुक कपडाहरूमा छ वा यदि यसलाई धेरै सुक्खा लिन अनुमति दिइन्छ भने। टमाटरको दाग हटाउन द्रुत गतिमा कार्य गर्नु आवश्यक छ पूर्ण रूपमा। यद्यपि, यदि तपाइँले यस समयमा दाग देख्नुभएन र धेरै घण्टा बितिसक्नुभयो भने, केही युक्तिहरूको साथ तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउन सम्भव छ।
यो कस्तो प्रकारको टमाटरले दाग पैदा गरेको हो भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि प्राकृतिक टमाटर टमाटर चटनीजस्तो छैन। टमाटरमा आधारित सॉसहरू जस्तै केचप, टमाटर केन्द्रितको अतिरिक्त, तेल, मसला र लिकुर हुन्छ। त्यसकारण अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू प्रत्येक केसमा केही फरक हुन्छन्। अनुसरण गर्दा तपाईले पाउनुहुनेछ टमाटर दाग हटाउन केहि सुझावहरू.
1 प्राकृतिक टमाटर दाग हटाउनुहोस्
2 फ्राइड टमाटर दाग हटाउन युक्तिहरू
3 अन्य सुझावहरू
प्राकृतिक टमाटर दाग हटाउनुहोस्
प्राकृतिक टमाटर हटाउन सजिलो छ, किनकि यसले दागलाई जटिल बनाउने कुनै अरू सामग्री वा थपकर्ताहरू समावेश गर्दैन। जे होस्, प्रक्रिया फरक छ यदि तपाईं नयाँ टमाटरको दाग हटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यदि यो पहिले नै सुक्खा दाग हो भने भन्दा। पहिलो केसमा तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ:
पहिले चम्चाको साथ बाँकी रहेको खाना हटाउनुहोस्यदि कपडा नाजुक छ भने फाइबरलाई नोक्सान नदिन बल प्रयोग नगर्नुहोस्।
कपडालाई चिसो पानीको मुनि राख्नुहोस्, यसलाई चलाउन दिनुहोस् कपडा भित्रबाट बाहिर.
निवेदन गर्नु डिटर्जेंट को एक सानो रकम डिशवाशर र तपाइँको औंलाहरु संग रग।
चिसो पानी संग कुल्ला डिटर्जेंट फोम पूर्ण रूपमा हटाइएको नभएसम्म
अगाडि बढ्नुहोस् लुगा धुनुहोस् सामान्यतया
यदि प्राकृतिक टमाटर दाग सुख्खा छ, तपाईं यी चरणहरू पालना गर्न आवश्यक यसलाई पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनको लागि।
भिजेको सेतो सिरका संग सूती कपडा सफा गर्दै।
सावधानीपूर्वक, टमाटरको दागमा यसलाई लागू नभएसम्म लागू गर्नुहोस् पूर्ण रूपमा।
कपडाका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रयोग गरेर जानुहोस्यसले टमाटरलाई कपडाका अन्य भागहरूमा स्थानान्तरण गर्न रोक्दछ।
चिसो पानी संग कुल्ला र सामान्य रूपमा धुने मेशिनमा धुनुहोस्।
फ्राइड टमाटर दाग हटाउन युक्तिहरू
प्याकेज गरिएको टमाटर सॉसमा एक भन्दा बढी घटक हुन्छन्, जसले अनावश्यकलाई हटाउन केही अधिक गाह्रो बनाउँछ। कपडाको दाग। छिटो तपाईंले कार्य गर्नुहुन्छ, अधिक सम्भावना तपाईं टमाटर दाग पूर्ण रूपमा हटाउनु हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाईंले आफ्नो लुगामा भुटेको टमाटरको दाग पत्ता लगाउनुभयो भने लुगा धुने टोकरीमा नछोड्नुहोस्। यी चरणहरू पालना गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो कपडाबाट टमाटरको दाग हटाउन सक्नुहुनेछ।
एक प्रापकमा एक सानो पानी संग बेकिंग सोडा मिक्स। दाग सफा गर्नको लागि तपाईंले ग्रेनेरी पेस्ट प्राप्त गर्नुपर्छ।
बेकिंग सोडा पेस्ट फैलाउनुहोस् दाग मा र लगभग १ minutes मिनेट को लागी छोड्नुहोस्।
समय बित्यो, मिश्रण हटाउनुहोस् र चिसो पानी संग कुल्ला।
यी चरणहरू दोहोर्याउनुहोस् टमाटर दाग पूर्ण रूपमा समाप्त नभएसम्म
अन्ततः, सामान्य जस्तो लुगा धुनुहोस् धुने मेसिनमा।
चाँडै अभिनय गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईं खराब निर्णयहरू लिने र परिस्थितिलाई जटिल पार्ने जोखिमलाई चलाउनुहुन्छ। जब हामी टमाटरको दाग पाउँछौं भने एक मध्ये एक अवशेष हटाउन रुमाल प्रयोग गर्नु हो, यो पक्कै गल्ती हो। रुमालले थप दाग र फेब्रिकको फाइबरले यसलाई राम्रोसँग मिस गर्न मद्दत गर्दछ.
यस्तो अवस्थामा दाग फैलिन सक्ने खतरा बिना, खानाको अवशेषहरू हटाउन चम्चा वा चक्कु प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईंले टमाटरको दाग लगाउने लुगा धुँदा तपाईंले ड्रायर पनि प्रयोग गर्नुहुन्नगर्मीले दागलाई कपडाको फाइबरमा राम्रोसँग मद्दत गर्दछ। लुगा धुने बेला, दाग स्थापना गर्न र यसलाई हटाउन कडा बनाउनको लागि तापलाई रोक्नको लागि यसलाई छायामा सुक्नुहोस्।
अन्तमा, यदि तपाईं आफ्नो कपडामा टमाटर दाग छ र यी कुनै पनि चालले तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, निराश नहुनुहोस्। अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्नु अघि, बजारमा केहि दाग हटाउने उत्पाद, अघिल्लो समाधान हटाउनका लागि कुर्नुहोस्। त्यो हो, लुगा धुनुहोस् र यसलाई पूरै सुक्नुहोस्। त्यसो भए तपाईको कपडा बिग्रिनु सक्ने खतरा बिना तपाई कुनै पनि अन्य चाल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » टमाटर दाग कसरी हटाउने